Cellulose ether Factory - China Cellulose ether Manufacturers, Suppliers
Cellulose Eta Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC LE40M yeGypsum Drymix Mortar
Hydroxyethyl methyl celluloseHEMC inogadzirwa kubva kune yakachena kwazvo donje cellulose.Mushure mekurapa alkali uye yakakosha etherification inova HEMC.Haina chero mafuta emhuka uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoshanda.
Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC LE40M ndeye multifunctional additive kune yakagadzirira-musanganiswa uye yakaoma-musanganiswa zvigadzirwa.Iyo yemhando yepamusoro yekukora mumiriri uye mumiriri wekuchengetedza mvura, inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvegypsum.
Hydroxyethyl methyl cellulose LE6M CAS 9032-42-2 yekugadzirira musanganiswa dhaka nekuchengetedza mvura yakawanda.
Hydroxyethyl methyl cellulose CAS9032-42-2, inozivikanwawo se hypromellose, cellulose hydroxypropyl methyl ether, inowanikwa nekushandisa high purity donje.celluloseseyakagadzirwa uye yakakosha etherification pasi pemamiriro ealkaline.
Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC inoshandiswa zvakanyanya seyakakora, inosimbisa uye inochengetedza mvura mumiriri.zvokuvakisa.Inopa kuchengetwa kwemvura uye kushanda kwematope, inogona kuvandudza kunamatira, kuderedza ganda uye kuwedzera nguva yakazaruka.HEMC inewo kugona kukora, yakaderera madota, kugadzikana kwePH, kuchengetedza mvura, yakanakisa firimu kuumba, uye yakakura enzyme kuramba, kupararira uye zvichingodaro.
Longou kambani ndiyo hurucellulose ether factorymuChina.Inopa akasiyana mamakisi ezvakajairwa cellulose ether uye mamweyakagadziridzwa cellulose etherkunyanya yekunamira mataira,wall putty, render uye nezvimwe.
Hydroxyethyl Methyl Cellulose Eteri HEMC mugadziri weTile adhesive C1/ C2
Cellulose ethersikirasi huru yezvekutengeserana yakakoshamvura-soluble polymerszvemaindasitiri ekuvaka nekuvaka.Cellulose ethers inokwanisa kuwedzera viscosity yeaqueous media.Iyo viscosifying kugona kwe cellulose ether inonyanya kudzorwa nehuremu hwayo hwemamorekuru, makemikari anotsiva akasungirirwa pairi, uye conformational hunhu hwepolymer cheni.
Methylhydroxyethyl cellulose (MHEC, methylhydroxypropyl cellulose (MHPC, hydroxyethyl cellulose (HEC),yakagadziridzwa cellulose ethersingave iri yega kana kuti yakabatanidzwa ndiyo inonyanya kushandiswa seruseru ether mukugadzira dhaka.
Hydroxyethyl methyl cellulose mvura inochengetedza mumiriri wemadziro putty
1. Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC LE100M inogadzirwa kubva kumucheka wakachena kwazvo wedonje.Mushure mekurapa alkali uye yakakosha etherification inova HEMC.Haina chero mafuta emhuka uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoshanda.2. Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC LE100M ine multifunctional additive yekugadzirira-kusanganiswa uye yakaoma-musanganiswa zvigadzirwa.Iyo yakakwira inoshanda yekuchengetedza mvura mumiriri, thickener, stabilizer, adhesive, film-forming agent mune zvekuvaka.3. Kuonekwa kweHEMC machena machena ...